« Alin'ny haiady III » :: Voaasa ireo mpikambana avy any amin’ny tempolin’iy Shaolin • AoRaha
« Alin’ny haiady III » Voaasa ireo mpikambana avy any amin’ny tempolin’iy Shaolin
Hamerina indray ny hetsika “Alin’ny haiady” i Jean Marc Koumba, tompondaka eran-tany indroa teo amin’ny kickboxing sady efa nisalotra ny anaram-boninahitra, tany Eoropa, amin’ny 13 desambra 2020.
Indroa nisy, taona 2003 sy 2004, ihany ity hetsika nampitolagaga ny maro ity. Enina ambin’ny folo taona aty aoriana, hiverina indray ka hanamarika izany ny fanasana vahiny maro mpiangaly taranja haiady. Isan’ireny ireo mpianatra ao amin’ny tempolin’ny Shaolin avy any Shina. “Nomena fanasana manokana izy ireo”, hoy i Jean Marc Koumba, mpamorona ny “Alin’ny haiady” teto Madagasikara.
Ankoatra azy ireo, ho avy ihany koa i Dominique Valera, izay mpikatroka haiady karate manana ny tepana mainty 9e Dan, avy any Frantsa. Tompondakan’i Eoropa tamin’ny taona 1966 hatramin’ny 1975 izy ary hitondra ny fahaizany haseho an’ireo mpankafy haiady, mandritra ny andiany fahatelo amin’ny “Alin’ny haiady”.
Toa an’ireo andiany roa dia eny amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina no hanaovana ny andiany fahatelo. “Maromaro ireo tompondaka avy any ivelany hampiaina ny alin’ny haiady andiany fahatelo. Hisy mihitsy aza fifanandrinana eo amin’izy ireo sy ireo tompondaka avy eto an-toerana, amin’ny haiady MMA. Hisy ny loka goavana hiadiana, mandritra izany”, hoy hatrany i Jean Marc Koumba.
Fihibohana fiarovana Manipy teny amin’ny fanajana fitsipika i Nicolas Dupuis
Hazakaza-piarakodia :: Sambany hampiantrano Slalom ny tanànan’Antsirabe